के तपाई पनि पटक-पटक चिया तताएर खाने गर्नुभएको छ ? एकपटक अवस्य हेर्नुहोस् « Sansar News
के तपाई पनि पटक-पटक चिया तताएर खाने गर्नुभएको छ ? एकपटक अवस्य हेर्नुहोस्
३१ भाद्र २०७८, बिहीबार १५:००
चिया । चियाको नाम नजान्ने र त्यसको स्वाद नचाख्ने संसायमा सायदै मानिस होलान् ।
चिया धेरै मानिसका लागि नशा जस्तै बनेका हुन्छन् । कतिपयले त चियाको एक चुस्कीसँगै आफ्ुले संसारकै आनन्द प्राप्त गरेको महसुस गर्छन् । कतिपय मानिसहरु दिनभरीमा दशौं कप चिया पिउने गरेको पनि पाइन्छ भने कतिपयले चिया पिउन नपाएकै कारण टाउको दुखेको यात फेरि फ्रेस नभएको गुनासो समेत गर्ने गरेका छन् । तर, दिनमा १–२ कप बाहेक बढी चिया पिउनु पनि स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने बताइन्छ ।
चिया धेरै प्रकारका हुन्छन् । दूध चिया, कालो चिया, मसला चिया, लेमन चिया अनि ग्रन टिलगायत । पछिल्लो समयमा स्वास्थ्यमा अझ बढी ध्यान दिनेहरुले ग्रीन टि पिउने गरेको पाइन्छ । तर चियाको पारखीले दिनको एकपटक दूधको चिया भने नखाइ छाड्दैन ।
पछिल्ला समयमा विभिन्न स्वाद र ग्राहकको मन तान्ने गरेर काठमाडौं लगायतका बाहिरी जिल्लामा पनि त्यस्ता चिया घरहरु खुलेका छन् । जहाँ चियाका पारखीहरु मात्र नभएर युवा देखि बुद्ध बृद्धासम्मको समय विताउने र मनका कुरा साट्ने थलोको रुपमा प्रयोग भएको पाइएको छ । त्यतिमात्र नभइ चिया घरमै बसेर अनलाइन मिटिङ, साथीभाइबीच छलफल चलाउने थलोको रुपमा पनि प्रयोग गरेको पाइन्छ ।
चिया पिउनाले चिसो भएको बेला, थकाइ लागेको बेला यात फेरि टाउको दुःखेको बेला आराम दिने गरेको चियाका पारखी बताउँछन् । तर, त्यहि चियालाई सहि तरिकाले प्रयोग नगर्दा हानि समेत पुर्याउने स्वास्थ्यविज्ञ बताउँछन् ।
आउनुहोस् जानौ पुनः तताएर पिउँदा कस्तो असर गर्छ त ?
धेरै मानिसहरु एकपटक चिया पकाएर त्यसलाई फेरि तताएर पिउने गर्छन् । यदि तपाईले पनि त्यसरी नै प्रयोग गर्नु भएको छ भने त्यो तपाईको स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुनसक्छ । चिया बनाएको १५ देखि २० मिनेटभित्र पिउनु पर्दछ ।
चिया पकाएर धेरै समय राख्दा यसको रङ पनि कडा हुने तथा यसमा रहेको पोषकतत्व नष्ट हुने बताइन्छ । पुनः तताएर पिउने बानीले चियामा हुने निकोटिनले स्वास्थ्यमा असर गर्ने बताइन्छ ।
त्यस्तै पुनः तताएर पिउने गरेको चियाका कारण पाचन प्रक्रियामा समस्या हुने तथा बनाएर राखेको चियामा व्याक्टेरिया पनि आउने हुनाले यस्तो चियाले स्वास्थ्यलाई असर गर्ने बताइन्छ ।
आज मात्रै चार पटक भूकम्प
यसरी गर्दैछ एमालेले स्थानीय तहको अधिवेशन, यस्ताे छ…
सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुको काम हेर्न माओवादीले बेग्लै कमिटी…
पश्चिमी वायुको प्रभावः आज यी २ प्रदेशमा भारी वर्षा र…
काठमाडौं । हाल बंगालको खाडिमा र मध्य भारतमा रहेका (उत्तरतिर सर्दै गरेको) न्यून चापिय